Dacwad ka dhan ah AMISOM oo laga furay Mareykanka | KEYDMEDIA ENGLISH
WASHINGTON, Maryekanka - Qareeno madax-banaan oo shirkadda Fly Africa ay shaqaaleysay ayaa ka furay Maxkamad ku taalla dalka Mareykanka dacawad culus oo ka dhan ah Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM.
Shirkaddan oo laga leeyahay Zimbabwe ayaa ka dacwoonaysa diyaarad ay Ciidamada Itoobiye ee qeybta ka ah AMISOM kusoo rideen 4-tii May 2020 garoonka diyaaradaha degmada Berdaale, ee gobolka Baay xili ay wadey gaargaar bini'aadanimo.
Mid kamida qareennada oo la hadlay VOA Somali ayaa sheegay in Fly Africa ay doonayso inay hesho magdhaw lacageed khasaaraha kasoo gaarey diyaaradda la riday iyo shaqaalihii uga dhintay, oo gaaraya 6 kuwaasoo isagu jiray Soomaaliya iyo Kenyan.
Ciidamada ku sugan Garoonka Bardaale ayaa la sheegay inay diyaaradda ka shakiyeen kadib markii ay ka timid jiho qaldan, oo aan lagu aqoon diyaaradaha inay kasoo degaan, kadibna ay gantaal kusoo rideen.
Taliska AMISOM oo xaruntiisu tahay Muqdisho, ayaa iska fogeeyay diyaaradda lasoo riday, iyadoo uu sheegay in Ciidanka falkan geystay ay yihiin Itoobiyaan, aan kamid ahayn Howlgalka Midowga Africa.
Comments Topics: amisom duulimaadka diyaaradaha gobolka baay itoobiya